October | 2017 | HimiloNetwork
Zakariya October 31, 2017	Leave a comment 280 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Maalinta Magaalooyinka Caalamka waxaa 27 December sanadkii 2013-ku dhawaaqay Kal-fadhiga Guud. Taniyo markaas 31 October sanad kasta ayaa loo dabaal-degaa. Hal-ku-dhegga guud ee Maalinta Caalamiga ee Magaalooyinka waa magaalo fiican iyo nolol hagaagsan, waxaana looga golleeyahay in lagu iftiimiyo guulaha laga sameeyey kacaanka magaaloobidda iyo caqabadaha horyaalla horumarka magaalooyinka. Markii ugu horreysay xuska Maalinta Caalamiga ee Magaaloobidda waxaa ...
Zakariya October 29, 2017	Leave a comment 364 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – 47-jir ku nool degmada La Paz ee gobalka Agusan del Sur, dalka Filibiin waxaa dhulka uu cagaha soo dhigo ugu danbeysay sanadkii 2014-ka kahor inta uusan ku korin geed dheer oo gurigiisa ku agyaal. Taniyo markaas dhulka sooma booqan, wuxuu maalintii oo dhan saarnaan jiray geedka dushiisa jeer dhawaantan ay waaxda dowladda hoose xoog kaga soo dejisay geedka. ...
Zakariya October 28, 2017	Leave a comment 266 Views
Mexico (Himilonetwork) – Bulsho tira-yar oo Muslimiinta ayaa ku koraya bulshada Maya ee Mexico halkaas oo ragu ay xiranayaan koofiyado: dumarkuna xijaab taas oo ku dhex milan dhaqanka bulshada Maya. “Dadku waxay nagu eegi jireen fiiro gurracan markii aan islaamnay, waxay moodayeen inaan argagaxiso nahay ama aan halis ku nahay iyaga,” Mustafa ayaa u sheegay Reuters. “Hayeeshe muddo kadib aragtidaas ...
Haweeney da’da oo shaqada looga ceyriyay si yaab leh.
Zakariya October 28, 2017	Leave a comment 197 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Haweeney da’ ah oo ku nool Texas ayaa la fajacsan ficil uu ku sameeyey madaxa Walmart kadib markii laga eryay booskii ay ku lahayd shirkadda. 84-jirta lagu magacaabo Frankie Ruffino oo degan Burton waxay u shaqeynaysay shirkadda Walmart muddo 10 sanadood ah. Ugu horreyn waxay u shaqeyn jirtay sida soo dhaweeye martida qaabila, balse markii caafimaadkeedu soo dhacay ...
Zakariya October 28, 2017	Leave a comment 328 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Nin ku nool dalka Shiinaha ayaa maareeyey cunista saxan cayayaan badan oo ka buuxo si uu ugu guuleysto dahab. Tartankan ayaana lagu qabtay magaalada Yunnan. Dad badan ayaa isku diiwaan-geliyay inay u tartamaan ku guuleysiga dahabka. Ka qeyb-galayaasha waxaa la siinayay saxan cayayaan uu ka buuxo inay ku wada cunaan muddo shan daqiiqadood ah sida ugu macquulsan. Qofka ...
Zakariya October 28, 2017	Leave a comment 227 Views
Beijing (Himilonetwork) – Afar arday oo dhigata Jaamacadda Hefei ee bariga Shiinaha ayaa dhawaan caddeeyey in caleemaha geedaha ay ku filan yihiin dhar ahaan in loo xiran karo. Sawirada afarta arday oo ku labisan caleemaha ayaa ku baahay baraha bulshada ee dalka Shiinaha, waxaana laga bixinayay aragtiyo isku qasan oo la xiriira sida 6,000 oo caleemood looga sameyn karo hu’ dhar ...
Zakariya October 25, 2017	Leave a comment 309 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Nin habsiiya dadka si farxadaysan oo ku nool New York City, ayaa si xun u weeraray haweeney ka diiday inay habsiiso, marka loo eego waaxda booliska New York. 25-jirka Jermaine Himmelstein wuxuu u baxaa bannaanada Union Square, halkaas oo dadka socotada ugu yeero inay habsiiyaan. Marka qof uu ka diido habsiinta, Himmelstein wuxuu u ficiltamaa sida xun. Toddobaadkii hore, gabar iyo ...
Zakariya October 25, 2017	Leave a comment 174 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Nin reer New Zealand ah ayaa qaniinyada Shinnida ka dhergay kadib markii uu muddo 30 ilbiriqsi ku dul fariistay kolay Shini ku jirto, marka loo eego muuqaal fiidiyow ah oo laga soo qaaday internet-ka. Jamie Granger oo ku nool Tauranga wuxuu u shaqeeyaa keydinta Shinnida. Maalin Aurel Braguta, oo saaxiibkiis ah, ayaa u balan-qaaday lacag dhan 1,000$ ...
Zakariya October 25, 2017	Leave a comment 366 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Laba nin oo xayawaannada jecel ayaa loo xiray kadib markii ay carqaladeeyeen barnaamijka Dolphin Show ah oo ka dhacayay Japan. Laba dalxiise oo sidoo kale ah geyfane u dooda noolaha waxaa la xiray maalintii Sabtida kadib markii ay carqaladeeyeen barnaamijka – iskuna tuureen biyaha si ay usoo badbaadiyaan gudaha xarunta Wakayama, sida boolisku ay sheegeen. Marka loo eego ...
Zakariya October 25, 2017	Leave a comment 216 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Madax-weynaha Faransiiska ayaa wejigiisu guduutay markii eygiisu uu ku kaadiyay kal-fadhi uu kula shirsanaa madax, marka loo eego muuqaal lasoo dhigay baraha bulshada. Falkan ayaa ka dhacay Elysee Palace kadib markii madaxweyne Emmanuel Macron uu la hadlayay saddex kamid ah xubnaha xukuumaddiisa. Brune Poirson oo qeyb ka ahayd shirka ayaa sheegtay inay maqashay cod qeylo dheer. Markii ay fiirisay ...
Carruurta Muslimiinta Blackburn oo qeyb ka ah ol’olaha nadaafadda.